Linegbọ elu ga-ekpuchi, ma ọ bụrụ na ijide COVID-19 n'ụgbọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Linegbọ elu ga-ekpuchi, ma ọ bụrụ na ijide COVID-19 n'ụgbọ
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
A na-akpọ ya Sky Covid Care Insurance, nke na-ekpuchi US $ 857 ka a kachaUS $ 8,570 uru maka ndị njem niile na-efe efe na ụgbọ elu nke ụgbọ elu si March 23, 2020 na June 30, 2020.
Obodo ya bụ Vietnam, ụgbọ elu bụ Vietjet. Vietnamjet ga-akwụ ụgwọ mkpuchi mkpuchi siri ike iji hụ na nchekwa ndị njem mgbe ọ na-efe n'ụgbọ elu ya.
Ndị njem ruru eru maka mkpuchi mkpuchi na uru sitere na Vietjet n'ime ụbọchị 30 malite na ụbọchị ụgbọ elu ha, n'agbanyeghị agbanyeghị isi iyi.
Iji ruo eruo maka mkpuchi mkpuchi, ndị njem kwesịrị ịnye ozi niile dịka "Usoro na ọnọdụ" nke Vietnamjet mgbe ị na-azụ tiketi.
Maka ọdịnihu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, onye na-ebu ọhụụ bụ Vietjet na-asụ ụzọ na mmemme nke "Chebe ụwa anyị - Fly with Vietjet" iji kpuchido ụwa, belata ihe egwu nke ọdachi na ọrịa na-efe efe ma nyere aka weta ụkpụrụ ndị mepere anya na nke mara mma nye ndị bi. n'ọtụtụ ebe ebe Vietnamjet na-efega.
N'ime ụwa juputara na ejighị n'aka, Vietjet chọrọ iweta ụkpụrụ mmadụ, mmesi obi ike nye ndị njem na obodo.